Mar स्मार्ट मार्केटिंग टेक्नोलोजी लगानीका कुञ्जीहरू Martech Zone
प्रकटीकरण: पोस्ट र सस्ता कॉमकास्ट सानो व्यवसाय द्वारा प्रायोजित, तर सबै विचारहरू मेरो आफ्नै हो। अतिरिक्त प्रकटीकरणको लागि कृपया तलको यो पोष्ट पढ्नुहोस्।
कमकास्ट ब्यापार समुदाय साइटमा मुख्य पोष्टहरू पढ्दा, यो हाम्रो लागि दुबै एजेन्सी र हाम्रा ग्राहकहरूको लागि साँचो भयो। एक एजेन्सीको रूपमा, हामी धेरै प्रविधिको इजाजतपत्र पाउँछौं, तर हामी आफ्नो ग्राहकहरूको सबैमा लागतहरू (र टेक्नोलोजी प्रयोगको इनामहरू काटेर) फैलाउन सक्षम छौं।
[बक्स प्रकार = "सफलता" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "90%"]तपाईंको भोट दिनुहोस् @Comcastbusiness I20,000E प्रतियोगिताबाट $ २०,००० लाई कसले जित्छ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न। अब भोट दिनुहोस् - मे १ # # I4E # विज्ञापन [/ बक्स]
प्रत्येक क्वाटरमेन्ट, हामी प्लेटफर्महरूको अडिट गर्छौं जुन हामीले इजाजतपत्र दिइरहेका छौं र निर्धारण गर्दा उनीहरूले हाम्रो ग्राहकहरू ल्याइरहेका छन्। प्राय: हामी केही उत्कृष्ट प्लेटफर्महरूमा हाम्रो सदस्यता रद्द गर्दछौं यदि तिनीहरूले फिर्ता प्रदान गरिरहेका छैनन् भने हामीलाई आवश्यक छ।
अनुसार कम्कास्ट बिजनेस, दुई तिहाई व्यवसाय मालिकहरू अप्ठ्यारो महसुस गर्छन् जब यो टेक्नोलोजीमा आउँछ @ कॉमकास्टबसनेस
कमकास्टबाट आएको इन्फोग्राफिकले कुनै पनि टेक्नोलोजी लगानी गर्नु अघि तपाईंले विचार गर्नु पर्ने key प्रमुख स्तम्भहरू औंल्याउँछ:
व्यवसाय योजना - तपाईले लगानी गर्नु भन्दा पहिले तपाईको लक्ष्य र बजार के हो? के तपाईंले लगानी गर्ने टेक्नोलोजीले तपाईंको दृष्टिलाई समर्थन गर्दछ?
ग्यापहरू भर्दै - तपाईंले लगानी गर्नु अघि, यो प्रविधि हो जसले तपाईंको समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ, वा यसले तपाईंको स्टाफको साथ बढी समय र टाउको दुखाइ दिन्छ?
सल्लाह लिनुहोस् - तपाईंले लगानी गर्नु अघि, तपाईंले अन्य उद्योग नेताहरू वा सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुभयो? हामी अक्सर विक्रेता छनौटमा ग्राहकहरु संग परामर्श गर्दछौं किनकी हामी बजारमा यति धेरै प्लेटफर्महरुसँग धेरै परिचित छौं।
उल्लेखनीय सल्लाह जुन म व्यवसायलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छु र फेरि फिर्ता आउन। टेक्नोलोजी बजेटहरू नियन्त्रण बाहिर सर्पिल गर्न को लागी गर्छ यदि तपाईं तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहनु भएको छैन!
प्रकटीकरण: कमकास्ट व्यवसायले ब्लागरहरूसँग साझेदारी गरे जस्तो म यो कार्यक्रमको लागि हो। यस कार्यक्रमको अंशको रूपमा मैले मेरो समयको लागि क्षतिपूर्ति पाएँ। उनीहरूले मलाई के खरीद गर्ने वा यस पोष्टमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि उत्पादनको बारेमा के भन्ने भनेर बताएनन्। Comcast Business विश्वास गर्दछ कि उपभोक्ताहरू ब्लगरहरू हुन् उनीहरूको आफ्नै राय बनाउन र उनीहरूलाई आफ्नै शब्दमा साझा गर्न स्वतन्त्र छन्। Comcast Business 'नीतिहरू WOMMA एथिक्स कोड, FTC दिशानिर्देशहरू, र सामाजिक मिडिया संलग्नता सिफारिशहरूको साथ पign्क्तिबद्ध गर्दछ।
टैग: comcastcomcast व्यवसायप्रतियोगिताi4eनिवेशमार्केटिंग टेक्नोलोजी लगानीप्रायोजितटेक लगानीप्रविधि लगानी